Nahoana no tsy manangantsaina? | Hery - Tsiky dia ampy |
Eny, mety ho hadisoana ny mampifangaro ny adilahy politika amin'ny resaka fetin'ny fahaleovan-tena kanefa toa izao ny hevitry ny olona:
Tsy manangan-tsaina izahay fa mbola tsapanay hoe ambany ziogan'ny mpanjanaka amin'ny fomba hafa i Madagasikara. Mbola ny Frantsay no mibaiko ny fomba handaminana ny politika eto Madagasikara. Niady mafy ireo Raiamandreny nitady fahafahana sy fahaleovan-tena kanefa ankehitriny dia nohosihosen'ny sasany izany ka aleo ampirimina aloha ny saina mandra-pahazo ny tena fahafahana indray.
Tsy manangan-tsaina izahay mba ho fanajàna ny saina sy ny fiandrianam-pirenena. Mandritra izao fotoana teteza-mita noterena izao dia tsy hitsangana ofisialy ny saina satria tsy voahaja ny safidy natao tamin'ny fifidianana.
Tsy manangan-tsaina izahay na dia saika hanangana ihany aza satria heno fa izany no fomba mangina hanoherana ny fitondran'ny FAT. Tianay haseho fa mitaky ny ara-dalàna izahay na dia tsy mirotsaka eny an-dalambe sy tsy mitady ady saritaka aza.
Tsy manangan-tsaina izahay satria tsy tianay ny fandrahonana atao ofisialy hoe izay tsy manangan-tsaina dia tsy karakarain'ny ao amin'ny fokontany ny taratasy. Tsy fotoanan'ny fampihorohoroana izao... ary tany demokratika i Madagasikara. Raha tsy izany dia naleo nijanona tamin'ny teo aloha ihany.
Tsy manangan-tsaina izahay satria tsy manam-bola hividianana na hanamboarana saina.
Tsy manangan-tsaina izahay satria aiza moa no hatsanganay ny saina? Eny ambany tonelina ve? Ny trano aza tsy anananay.
Dia inona no antony hanangananao saina?